မိခင်က သမီးဖြစ်သူကို အခကြေးငွေယူပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ ချစ်တင်းနှောစေခဲ့ | Buzzy
မိခင်က သမီးဖြစ်သူကို အခကြေးငွေယူပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ ချစ်တင်းနှောစေခဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံက မိခင်တစ်ဦးဟာ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ သမီးငယ်ကို အခကြေးငွေယူပြီး အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ အိပ်ဖို့ ညွှန်ကြားမှုကြောင့် လူကုန်ကူးမှု ဥပဒေနဲ့ ဖမ်းဆီးအရေးယူခံရပါတယ်။
ထိုငျးနိုငျငံက မိခငျတဈဦးဟာ အသကျမပွညျ့သေးတဲ့ သမီးငယျကို အခကွေးငှယေူပွီး အမြိုးသားတဈဦးနဲ့ အိပျဖို့ ညှနျကွားမှုကွောငျ့ လူကုနျကူးမှု ဥပဒနေဲ့ ဖမျးဆီးအရေးယူခံရပါတယျ။
ဒေသတွင်း သတင်းပေးတွေရဲ. အဆိုအရ သမီးဖြစ်သူဟာ ကျူးလွန်ခံရစဉ်က အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ သူမဟာ အသက် ၇၅ နှစ်အရွယ် ဖောက်သည်ရဲ. ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားပေးရပြီး အဘွားဖြစ်သူနဲ့ နေထိုင်ကာ ၊ ကလေးမွေးဖွားပေးပြီးမှ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာကို ပြောင်းရွှေ.နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒသေတှငျး သတငျးပေးတှရေဲ. အဆိုအရ သမီးဖွဈသူဟာ ကြူးလှနျခံရစဉျက အသကျ ၁၃ နှဈအရှယျသာ ရှိသေးတယျလို့ ဆိုပါတယျ ။ သူမဟာ အသကျ ၇၅ နှဈအရှယျ ဖောကျသညျရဲ. ကိုယျဝနျကို လှယျထားပေးရပွီး အဘှားဖွဈသူနဲ့ နထေိုငျကာ ၊ ကလေးမှေးဖှားပေးပွီးမှ ကလေးသူငယျစောငျ့ရှောကျရေး ဂဟောကို ပွောငျးရှေ.နထေိုငျခဲ့ရပါတယျ။
ဒီအမှုအတွက် အသက် ၆၆ နှစ်အရွယ် အဖွားနဲ့ အသက် ၄၂ အရွယ် အမျိုးသမီးတို့ အဖမ်းခံခဲ့ရသလို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားကိုလည်း ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဒီအမှုအတှကျ အသကျ ၆၆ နှဈအရှယျ အဖှားနဲ့ အသကျ ၄၂ အရှယျ အမြိုးသမီးတို့ အဖမျးခံခဲ့ရသလို ကြူးလှနျခဲ့တဲ့ အမြိုးသားကိုလညျး ဖမျးဆီးအရေးယူခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ ။